Traditional Ceremonies – The Ulwazi Programme
Engxenyeni yokuqala sigcine ngenhla kwamadolo ngokunaba ngomkhosi kaNomkhubulwane, kodwa ke sendlalele ngokucelwa kweNala, okuba umkhosi wokuqala ngaphambi kokuba komkhosi kaNomkhubulwane. UNomkhubulwane ulandela wona lomkhosi wokucela inala njengomvula nkundla womkhosi omkhulu wokucela imvula uma izwe libulawa inkemane imvula ingabonwa evundisa amasimu uma kulinyiwe. Uma sekuqediwe ukugaywa utshwala ngalembewu buhanjiswa emasimini ngezigubhu ezingazange zigeqwe. Lensimu iba sentabeni, … Read more
Isimningana yona imikhosi yasekhaya esekulotshwe ngayo kulengosi yolwazi lwesintu, noma seluhlutshiwe udlubu ekhasini kodwa ke ngithi ake ngiqhubeke ngenabe njengoba ngelulelwe isandla sokwenaba. La ke sibhunga ngokucela inala. Into eyenza ukuthi kugxilwe kulemkhosi engasewona ndabamlonyeni manje ukufundisa laba abanolwazi oluncane ngayo, njengoba okhokho bethu bekuyinto abayitusayo ukugubha imikhosi kwaZulu. Lomkhosi wabe wenganyelwa inkosi, okwakuthi iziphakanyiswa … Read more
Sike sathi qaphu ngendaba yomkhosi woSelwa kulengosi yolwazi, ngithi ke angikubalule ukuthi akusibo bonke abantu abaya esigodlweni ukuyobungaza lomkhosi, kepha lomkhosi uyagujelwa emakhaya kulaba abangayanga esigodlweni. Abakude kanye nezingane abayi esigodlweni, kepha bashwamela ekhaya. Emva sekuzwakele ukuthi inkosi isinyathelile uselwa, kuba ithuba leziphakanyiswa zezinhlanga ngezinhlanga zenkosi njengoMntungwa, oDlaba, kanye noShenge kanye nabanye okuba babize abangaphansi kwabo … Read more